လူ ပြိန်း ကြိုက် သ တင်း (၂ ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လူ ပြိန်း ကြိုက် သ တင်း (၂ )
လူ ပြိန်း ကြိုက် သ တင်း (၂ )
Posted by မင်း ခန့် ကျော် on Nov 6, 2013 in Myanma News | 11 comments
မြန်မာ့ကမ်းလွန် ရေနံလုပ်ကွက် ၃၀ ကို လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိရန် စိတ်ပါဝင်စားသည့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများ အနေဖြင့် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် အပြီးသတ် ကမ်းလှမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် ၃၀ ကို လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိရန် နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများဖြစ်သော Royal Dutch Shell PLC, Exxon Mobil Corporation, Total, Statoil စသည့် ကော်ပိုရေးရှင်းများက အကြိုတင်ဒါ အောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ ၆၁ ခုတွင် ပါဝင်နေသည်။
အဆိုပါ ရေနက်လုပ်ကွက်များအတွက် ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုလျှင် သုံးကွက်ထက် ပိုမိုကမ်းလှမ်းနိုင်ပြီး လုပ်ကိုင်ရန် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းရန်လည်း မလိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုအချိန်ထိ တင်ဒါခေါ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိနေပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီကို သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ခံစားခွင့်များ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီများက သုံးသပ်ကြ . . . . .
အဆိုပါ ရေနက်လုပ်ကွက်များကို ပြည်ပကုမ္ပဏီကြီးများ အနေဖြင့် အကျိုးအမြတ် မည်မျှရရှိမည်ကို မသိရှိရဘဲ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း International Business Times သတင်းစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။
ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်များ လုပ်ကိုင်ရန်မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကြီးမားစွာ ပြုလုပ်ရသလို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ကိုင်ရသည့် ၀န်းကျင်မတည်ငြိမ်မှု များလည်းရှိကြောင်း IBM က ဖော်ပြခဲ့သည်။
သို့သော် ယခုအချိန်ထိ တင်ဒါခေါ်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်မှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိနေပြီး စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနက လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီကို သုံးနှစ်မှ ငါးနှစ်အတွင်း အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ခံစားခွင့်များ ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ပစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီများက သုံးသပ်ကြသည်။
လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ရရှိသည့် ကုမ္ပဏီကို လာမည့်နှစ် အစောပိုင်းတွင် ကြေညာဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပမာဏ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၄ ဘီလျံကျော်ရှိပြီး ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက် ၁၈ ကွက်ကို နိုင်ငံပေါင်း ၁၀ နိုင်ငံကို ထပ်မံလုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုခဲ့ကြောင်း စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုပ်ကွက်များမှ ထွက်ရှိသည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များအား ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ တင်ပို့ရာတွင် ၂၀၁၀-၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၂၂ သန်းကျော်၊ ၂၀၁၁-၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၄၆၃ သန်းကျော်နှင့် ၂၀၁၂-၁၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၄၈ သန်းကျော် အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂ ပုဒ် ပြည့် လို့ အောက်က ထပ်ဖြည့်ပေးတာပါ။
“ပိုက်လိုင်း ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ ဒေသအချို့မှာ ခုချိန်ထိ မြေယာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လျော်ကြေးမရတာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ လျော်ကြေးကို သုံးရစ်ခွဲပေးမယ်ပေါ့။ ပထမ တစ်ရစ်ပေးတယ်။ လက်မှတ်တွေ ထိုးခိုင်းတယ်။ နောက်ထပ်ပေးဖို့ကိုကျတော့ ဒေသအာဏာပိုင်တွေက ငါတို့တွက်တာ မှားသွားလို့ မင်းတို့ ဒီဟာအပြီးပဲဆိုပြီး ထပ်မပေးတော့တာတွေလည်း ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ရခိုင်နဲ့ ရှမ်းမြောက်ဒေသတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်”ဟု စိမ်းရောင်စို(မန္တလေး)မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
စီမံကိန်းတွေ တစ်ခုခုသာ ပြီးသွားတယ်.. မွဲသွားတာ ဘာမှလက်ဆုပ်လက်ကိုင်မရလိုက်တာက
ပြည်သူတွေ၊ ချမ်းသာသွားတာက စီမံကိန်း နဲ့ ပတ်သက်သူတွေ… အဟွတ်.. ဟွတ်..။
အဘဘုတ်တို့တုန်းကတော့ တုံကင်ရေလေးသောက်ပြီး ဒီအရွယ်ရောက်လာတာပဲကွယ်…။
စီမံကိန်းတကယ်တန်တာက ၁၀၀ ကျပ် + ဘုံးငွေ ၁၀၀ ကျပ် = စုပေါင်းအရင်း၂၀၀ ကျပ်
ကြည့်နေ အဘရေ ရှုံးလို့ တို့ စိုက်ရပါတယ်တို့ လာလိမ့်အုံးမယ်။
မလေးရှား၊ တူနီးရှား ၊ အင်ဒိုနီးရှား ၊ တွေကို အားကျလို့
မြန်မာနိုင်ငံကို ” ရေမီးရှား ” လို့ နာမည်ပေါက်နေတာ …
အခုတော့ ” ရေမီးပေါ့ ” နိုင်ငံ ဖြစ်တော့မှာပေါ့……ဟဲဟဲ..။
ခုရက်ပိုင်း စိတ်ဝင်စားမိတဲ့ သတင်းကတော့ ဆင်ဖြူတော်ကြီးကို ကြိုးနဲ့တုပ်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးပါ။ ရင်ထဲမှာ ကျလိ ကျလိနဲ့ ဝေဖန်ချင်နေတာ။ ဆင်ဖြူတော်က ဆင်ဦးစီး ဦးသိန်းစိန်ကို အစွယ်နဲ့ထိုးပြီး နင်းသတ်ခဲ့လို့ ခုလို ကြိုးနဲ့တုပ်ထားတာပါ။ ဘယ်က ဘယ်လို စပြောရမယ်တောင် မသိတော့ဘူး။ ဝေဖန်ချင်လိုက်တာ လျှာကိုယားနေတာပဲ။ အ၇င်အစိုး၇ မရှိတော့ဘူးဆိုမှတော့ ဒီလို ဆင်ဖြူတော်တွေကို သီးသန့်ထားစရာ လိုပါဦးမလား။ ဆင်ဖြူတော် နေရတဲ့နေရာကလည်း ဆင်နေရာက တွေးကြည့်ရင် တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲစရာ။ တိရစ္ဆာန် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့ ဆင်ကတောင် တရားပြန်စွဲလို့ရဦးမယ်။ တကယ်တော့ ဆင်ဟာ ဆင်ပါပဲ။ တိရစ္ဆာန်ရုံလိုမျိုး၊ တခြား ဘေးမဲ့တော လိုမျိုးမှာ ထားရင် တော်သေးတယ်။ ဆင်လည်း သနားပါတယ်။
အဲဒီအကောင်ကြီးကို.. လတ်စ်ဗေးဂတ်ကကာစီနိုကိုရောင်းမယ်ဆို.. တော်တော်ဈေးရမှာ..
ကာစီနိုသမား မီရေ့ခ်ျကလူတွေ.. ကျားဖြူ ခြင်္သေ့ဖြူတို့နဲ့လုပ်စားနေတာ.. တော်တော်အိုကေတယ်..
ပိုလုပ်တတ်ရင်တော့.. မြန်မာပြည် ချင်းတောင်မှာ ကာစီနိုရုံဆောက်.. ဆင်ဖြူတွေနဲ့လုပ်စားဖို့ပဲ..။
White Tigers at The Mirage – Las Vegas
http://www.lasvegas.net › Attractions‎
White Tiger Habitat is on of many attractions at The Mirage Hotel and Casino . … The open-air home of Siegfried & Roy’s Royal White Tigers is available for …
ဦးခင်ညွန့်တောင် ဘင်္ဂလားဒေ့ ဘက်က ခရုသင်းစွဲ
ခြောက်သောင်းလျော်လိုက်ရတယ်ဆိုလား ဘာလား ဒါက
ဘာဘဲပြောပြော ဆင်ဖြူ တော်ဆိုတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ကျတော့်
အမြင်က တော့ ” အရထူး” တာဖြစ် ကြောင်းပါ
သာဂျီးတာမီးအားလည်း ကြောင်ကြီး ချီးမည်ဖြစ်ကြောင်း… မွှားလို့ ပြင်ဖတ်ပါ ဟောသလို.. သာဂျီးတာမီးအား ကြောင်ကြီး ချီမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သေတပန်သက်တဆုံး တာဝံယူဂျောင်း၊ သာဂျီးမှပေးမည့် အိမ်၊ ကား၊ ဘဏ်အပ်ငွေနှင့် ပင်စင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေ တခုမှ မမက်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောဆိုသွားသီ..။